I-Apple Watch - I-Apple Watch | Izindaba ze-IPhone
I-Apple Watch Yigama lewashi lenkampani yama-apula, isesekeli esigcwalisa ngokuphelele i-iPhone ukusinikeza kusuka esikrinini sayo uchungechunge lwezaziso ezisebenzisanayo esingazilawula kusuka kusixhumi esibonakalayo sayo esisha esenzelwe i-Apple Watch.
Ukulawula iwashi le-apula Sinesibonisi sokuthinta nesondo le-roulette elibizwa ngeDigital Crown, elihambisana ne-gyroscope, i-heart rate monitor kanye ne-accelerometers, elizokwenza kube igajethi ebalulekile kwabaningi.
Imodeli ejwayelekile ye- insimbi, imodeli ezemidlalo de i-aluminium nolunye ucingo edition en I-karat 18 yegolide. Izinhlobo ezahlukahlukene ze pulseras ukukhetha ukusishiya ngokuphelele njengokuthanda kwethu.
La impilo futhi i izihlanganisi, imfashini engapheli nalapho i-Apple Watch inokuningi ukusho kusukela lapho iyakwazi ukulinganisa isilinganiso senhliziyo yakho. Ngeke ilahleke osukwini lwakho lwansuku zonke noma lwezemidlalo.
Izindaba ze-Apple Watch
Uma ufuna ukwazi konke izindaba nge-Apple Watch futhi ufunde izindaba zakamuva, izesekeli, izinhlelo zokusebenza ezihambisana newashi le-Apple nolunye ulwazi oluhlobene, lesi isayithi lakho.
Por UMiguel Hernandez kwenza Isonto eli-1 .
I-Apple Watch inenqwaba yezimbulunga, futhi njengokungathi lokho akwanele, iningi lazo lingenziwa ngokwezifiso cishe ukuze ...
I-Apple Watch ingathola ukwehluleka kwenhliziyo nge-EKG elula
Por ULuis Padilla kwenza Amaviki angu-2 .
Ucwaningo olusha luthuthukisa ukuthi kungenzeka ukuthi i-Apple Watch yethu ithole ukwehluleka kwenhliziyo ngaphambi kokuthi ikhombise izimpawu ...
I-Apple Watch ngaphandle kwenzwa yokushisa?
Inzwa yokushisa komzimba ibingenye yezinto obekucatshangwa ukuthi zizofakwa yimodeli entsha ye-Apple Watch,…
Thola Inselele Yosuku Lomhlaba Lwangu-2022 Limited Edition Namuhla
Por UJordi Gimenez kwenza Amaviki angu-4 .
Namuhla ngolunye lwalezo zinsuku lapho abasebenzisi be-Apple Watch benenselelo entsha okufanele bayithathe…
Por U-Angel Gonzalez kwenza Inyanga e-1 .
NgoJuni 6, i-WWDC22 izoqala, umcimbi omuhle kakhulu wabathuthukisi be-Apple bonyaka. Ephuzwini eliyinhloko...
I-watchOS 9 izofaka imodi yesilondolozi sebhethri njengale eku-iOS naku-iPadOS
Imodi yesilondolozi sebhethri ku-iPhone ne-iPad yehlisa inani lamandla asetshenziswa amadivayisi uma...
Ukuzimela okukhulu, ama-sphere amasha, inzwa yokushisa nezinye izindaba ze-Apple Watch
Por ULuis Padilla kwenza Inyanga e-1 .
I-watchOS 9 izoba ngomunye wabalingiswa abakhulu ku-WWDC 2022 ngoJuni ozayo, futhi i-Apple ibonakala ...
U-Apple kungenzeka ayeke i-Apple Watch Series 3 kulo nyaka
I-Apple Watch Series 3 yethulwa ngoMashi 2017 futhi yahlanganiswa nokuxhumana kwe-LTE njengesici sefulegi. Ngaphandle...
TOP 10 Apple Watch imisebenzi yokuphila kwansuku zonke
Izici ezithuthuke kakhulu ze-Apple Watch zaziwa abaningi, kodwa ziningi ezinye izinto esingakwazi...
Ngo-2021 i-Apple Watch yaqhubeka nokushaya zonke izimbangi zayo
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-2 .
Kubonakala sengathi izibalo zokuthengisa zamawashi ahlakaniphile e-Apple azixegi futhi abahleli ukwenza kanjalo, ikakhulukazi…
Manje usungakwazi ukubuyisela i-Apple Watch usebenzisa i-iPhone yayo
Lesi ngesinye sezici eziningi ezintsha ezisetshenziswe ezinguqulweni zakamuva ze-iOS ne-watchOS ezikhishwe...
Uyini umehluko phakathi kwemodeli ene-GPS nemodeli ene-GPS + Cellular?
Ungayilungisa kanjani i-Apple Watch emisa okweqhwa ekhombisa i-Apple apple
Ungaba kanjani ne-WhatsApp ku-Apple Watch
I-Apple Watch nomsebenzi, okhiye bokuyiqonda
Okufanele ukwenze lapho i-Apple Watch ingavuli noma ingasebenzi kahle